“ပဲခူးတိုိင်းဒေသကြီး အနိမ့်ပိုင်းမှာ နေထိုင်ကြသူများ ဘေးလွတ်ရာသို့ ရှောင်ထားပေးပါ”
“သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ ၀င်းနဲ့ ဇော်အတွက် နောက်ဆုံး မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု လာပါပြီ။”
သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ ၀င်းနဲ့ ဇော်အတွက် နောက်ဆုံး မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု လာပါပြီ။ ဘာလဲဆိုတော့ မြန်မာအစိုးရက ထိုင်းဘုရင့်မင်းမြတ်ဆီကို အသနားခံစာ တင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရင်မင်းမြတ်ဆီကို သေဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီး ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း တင်ရမှာဖြစ်ပြီးအခု မြန်မာအစိုးရက အသနားခံစာတင်ဖို့ အတွက် ထိုင်းရှေနေ့ကောင်စီ နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ ထိုင်းရှေနေ့ကောင်စီဆိုတာ […]
“ကျောင်းဆရာက သားမယားပြုကျင့်လို့ ၁၂ နှစ်​အရွယ်​​ကျောင်းသူ​လေး ကိုယ်​ဝန်​ရှိမှု”
“ကျောင်းဆရာက သားမယားပြုကျင့်လို့ ၁၂ နှစ်​အရွယ်​​ကျောင်းသူ​လေး ကိုယ်​ဝန်​ရှိမှု” အိန္ဒိယနိုင်​ငံ​မြောက်​ပိုင်း၊ Malappuram ​ဒေသက အသက်​ ၁၂ နှစ်​အရွယ်​ ​ကျောင်းသူ​လေး တစ်ဦးဟာ ​ကျောင်းဆရာဖြစ်​သူရဲ့သားမယားပြုကျင့်​ခြင်းကို ခံလိုက်​ရပြီး ကိုယ်​ဝန်​ရရှိသွားခဲ့တဲ့ အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်​​​လို့ India သတင်းဝက်​ဘ်​ဆိုက်​မှာ ​ဖော်​ပြပါရှိခဲ့ပါတယ်​။ ရဲဌာရဲ့အဆိုအရ ​ကျောင်းဆရာဖြစ်​သူဟာ ထွက်​​ပြေး တိမ်း​ရှောင်​​​နေတယ်​လို့ သိရပြီး […]
“ထိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဝက်ဆိုက် ၁၂၀ ကို ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီး ၀င်း နှင့် ဇော်တို့ရဲ့ ပုံနှင့် နိုင်ငံတော် သီချင်းကို တင်ထားခဲ့တဲ့ မြန်မာဟက်ကာအဖွဲ့”
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ကော့စမွီခရိုင်၊ လိပ်ကျွန်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူသတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇော်လင်းတို့ကို သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အတွက် တရားမျှတမှုနဲ့ အမှန်တရား ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ဆိုပြီး Union of UnderGround Myanmar Hackers အဖွဲ့က ထိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ဝက်ဆိုဒ် ၁၂ဝ ကို ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ […]
ထပ်မံပေါ်ထွက်လာသည့် ၇ ကြိမ်မြောက် ထီဖွင့်ပွဲမှ သိန်း ၅၀၀၀ နှင့် သိန်း ၁၀၀၀ ဆုရှင်များ
ထပ်မံပေါ်ထွက်လာသည့် ၇ ကြိမ်မြောက် ထီဖွင့်ပွဲမှ သိန်း ၅၀၀၀ နှင့် သိန်း ၁၀၀၀ ဆုရှင်များ ယနေ့ ထွက်တဲ့ (၇) ကြိမ်မြောက် ထီဖွင့်ပွဲကနေ သူဌေးလောင်းတွေ အစီအရီ ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ သိန်း ၂၀၀ ကံထူးရှင်မှ အစ ပြု သိလိုက်ရပြီ အခုအခါမှာတော့ […]
၇ ကြိမ်မြောက်ထီဖွင့်ပွဲမှ သိန်း ၂၀၀၀ ဆုရှင်ထွက်ပေါလာပြန်ပါပြီ (၇) ကြိမ်မြောက် သူဌေးလောင်း ရွေးပွဲမှာတော့ ကံထူးရှင် အသီးသီး ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ အခုဆိုရင် သိန်း ၂၀၀ ၊ သိန်း ၁၀၀၀ ၊ သိန်း ၅၀၀၀ ကံထူး ရှင်တွေ အသီးသီးကို အားလုံး […]
၇ ကြိမ်မြောက် သိန်း တစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပြီ (၇) ကြိမ်မြောက် မဟာကံထူးရှင် ရွေးချယ်ပွဲကြီးမှာ ဆီဆုမဲပိုင်ရှင် အသီးသီးတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ ပေါက်တဲ့သူတွေ လည်း ဝမ်းသာကြသလို မြင်ရကြားရတဲ့ သူတွေလေး ပီတိဖြစ်ကြပါတယ်။ ဝမ်းမြောက်ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်မဟာ့ကံထူးရှင် တစ်ယောက်ကိုတော့ တိတ်တဆိတ်ငုပ်လျှိုးနေခဲ့ ပါတယ်။ […]
ယနေ့ (၇) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီ ဖွင့်ပွဲမှ ကျပ် သိန်း ၂၀၀ ကံထူးရှင် တစ်ဦးတော့ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ.
ယနေ့ (၇) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီ ဖွင့်ပွဲမှ ကျပ် သိန်း ၂၀၀ ကံထူးရှင် တစ်ဦးတော့ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ. သူတို့ကတော့ အောင်သစ္စာရပ်ကွက်က ကိုမျိုးထွဠ်ဇော် နဲ့ မနှင်းနှင်းအေးတို့ ဖြစ်ပြီးတော့ ၇ကြိမ်မြောက် ထီဖွင့်ပွဲမှ သိန်း၂၀၀ ဆုကြီး ကို အ ၇၁၃၈၁၅ […]
တို့ဆေးမိနေသည်ဟု ယူဆရသော အမျိုးသမီးတဦး ညောင်လေးပင်ဆေးရုံသို့ ရောက်နေ
တို့ဆေးမိနေသည်ဟု ယူဆရသော အမျိုးသမီးတဦး ညောင်လေးပင်ဆေးရုံသို့ ရောက်နေ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်လေးပင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ တို့ဆေးမိသည်ဟုယူဆရသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် ည ၇ နာရီခွဲအချိန်ခန့်က ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း မြို့မရဲစခန်းကသိရသည်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးအား ရဲစခန်းသို့အကြောင်းကြား ကာလာအပ်သော အမျိုးသမီးက “ကျမတို့ဆိုင်ကို အပေါ့သွားချင်တယ်ဆိုလို့ […]
အကူအညီများလိုအပ်နေပြီဖြစ်သည့် ပေါက်ခေါင်း မြို့ရေကြီးမှုနောက်ဆုံးရသတင်းများ
အကူအညီများလိုအပ်နေပြီဖြစ်သည့် ပေါက်ခေါင်း မြို့ရေကြီးမှုနောက်ဆုံးရသတင်းများ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ (၅)ရပ်ကွက် တို့ကို ရေတွေ ဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့် လူနေအိမ် (၆)လုံး ပြိုလဲပြီးတော့ (၁၁) လုံး ရေနဲ့ မျောပါခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ […]